Madaxweynaha Oo Hargeysa Ka Furay Wejiga Labaad Ee Qorshaha Horumarinta Qaranka | Dhamays Media Group
Madaxweynaha Oo Hargeysa Ka Furay Wejiga Labaad Ee Qorshaha Horumarinta Qaranka
Hargeysa (Dhamays) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa Maanta furay Wejiga labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka Somaliland (The National Development Plan II – 2017-2021).
Wasiir Qabyo-tire oo hadalkiisa sii wataa wuxuu sheegay “Xukuumaddu waxay sannadkii 2012-kii ku dhaqaaqday in laga midho-dhaliyo hiigsiga, lana Abuuro Qorshe Qaran 2012-2016-kii ku ekaa. Markii uu dhamaaday Qorshihii Qaran ee 2012-2016 waxaanu samaynay Qiimayn, waxaana soo baxday in Hay’ado badan oo Dawli ah ama Caalami ahi aanay ku dabaqin Barnaamijkii horumarineed, Maaddaama oo ay innagu cusbayd Nidaamka Qorshaha Qaranku. Haddaba Annaga ka faa’ideysanayna dhacdooyinkaas iyo kuwii ka soo baxay Qiimayn aanu ku samaynay Qorshaha cusub ee 2017-2021-ka siday noqon lahayd waxaanu la wadaagnay dhammaan Hay’adaha iyo ururrada Bulshada ee ku shaqada leh. Nasiib-wanaag ah in Hay’aduhu noogu dhego-nuglaadeen inay nagala qayb-qaataan Barnaamijka, Barnaamijkaasi oo aanu ka soo bilownay Heer Degmo, Heer Gobol illaa Heer Hay’adeed.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Barnaamijkan oo aanu ka shaqeynaynay muddo laba Sanadood ah wuxuu soo maray Marxalado kala duwan. Qorshaha guud ee Horumarinta Qaranka waxa Muc u ah Saddex Arrimood, kuwaasi oo kala ah yaraynta Saboolnimada, kor u qaadidda u adkaysiga Masiibooyinka ka dhasha Isbeddelka Cimilada iyo Ilaalninta xuquuqda Aadamaha. Sidaasi darteed Somaliland waxa ka go’an inay masuul ka noqoto dhismaha Aayaheeda dhaqaale, si ay Dhallinyaradeeda u siiso waxay u qalmaan, waxaanu ku faraxsannahay in Qorshahani horseedi doono horumar laga gaadho Adeegyada Bulshada iyo la dagaalanka Saboolnimada. Ugu dambayn Qorshaha Horumarinta Qaranku wuxuu xoojinayaa sidii Mucaawimooyinka ay Somaliland Gooni ugu noqon lahayd, qorshahaasi oo la jaan-qaadi doona meeqaamka gaarka ah ee Dalalka Adduunka.”
Furitaanka Shirka Wasaaradda Qorshayntu ku soo bandhigay Wejiga Labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka, oo ay ka hadleen Masuuliyiinta badan oo ay ka mid yihiin Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Qaranka, Xubno ka socday Hay’adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxaliga ah, ayaa waxa furay isla-markaana Khudbad dheer ka soo jeediyey Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Madaxweyne Axmed-Siilaanyo ayaa khudbaddiisa kaga warramay Marxaladihii kala duwanaa ee Somaliland u soo martay Heerka ay Maanta taagan tahay iyo waxa loo sameeyay Qorshaha Horumarinta Qaranka, waxaanu yidhi “Mudanayaal iyo Marwooyin, Jamhuuriyadda Somaliland, waxay halkan ku soo gaadhay hayaan dheer iyo halgan qadhaadh, oo marxalado kala duwan soo maray. Tan iyo intii aynu xornimadeena la soo noqonay, waxaynu ku guulaysannay inaynu dhidibbada u taagno dhismaha qaran madax-bannaan, iyo nidaam dawladeed oo dhammaystiran.
Eebbe Mahaddii, waxaynu ku guulaysannay nabad iyo xasilooni buuxda, taas oo ku timid midnimada, wada-jirka iyo iskaashiga Ummadda Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa hubaal ah, in muddadaa rubuc qarniga ah, inaga oo aan aqoonsi haysan aynu ku talaabsannay horumar weyn oo la taaban karo, taas oo Somaliland ka dhigtay xaqiiqo jirta, oo nin neceb iyo mid jecel toonna aanu dafiri karin.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Inkasta oo aynu xaqiijinnay guulaha aan soo sheegay, Somaliland waxay la wadaagtaa wadammada soo koraya caqabado tiro badan, sida dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, deegaanka, shaqo la’aanta, saboolnimada, iyo tayeynta maamulka dawladnimo. Waxa si weyn inoo saameeyey abaaro soo noq-noqonaya, oo ay sabab u tahay isbeddelka cimillada dunidu, kuwaas oo inagu keenay hoos u dhac dhaqaale.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxa maanta farxad weyn inoo ah, in aynu daah furno qorshihii labaad ee horumarinta qaranka 2017 ilaa 2021. Qorshahani, waa mid dedaal badan la galiyey, oo ku salaysan xog, xaqsoor iyo xaqiiqo dhab ah. Qorshahani, waa mid ay taladiisa ka qayb-qaateen dadka iyo deegaanada, ay sida tooska ah iyo sida dadban u khusayso. Qorshaha Horumarinta qaranka ee labaad, wuxuu mudnaan siinayaa sidii loogu talaabsan lahaa horumar ballaadhan 5-ta sanno ee soo socda, si gaar ah, wuxuu u abbaaraya
Siyaasadda Qarankan, waxa udub-dhexaad u ah talo-wadaag iyo isku tashi, hoggaankiisuna waa qori isu-dhiib. Sidaa darteed, waxaan rejaynayaa in Madaxweynaha i beddeli doonaa uu xaqiijin doono Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Labaad. Geba-gebadii, waxaan si weyn ugu mahad-naqayaa, Dawladdaha aynu saaxiibka dhaw nahay, ee Somaliland ka taageera Horumarka iyo Geeddi-socodka Dimuqraadiyadda, waxaan leeyahay; "LIBAAX NIN GALLADAY, IYO NIN GANAY, LABADABA UU OG-YAHAY".
Ugu dambayn, Madaxweynuhu uu Shahaado-sharraf guddoonsiiyey Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Somaliland.
Previous: Hargeysa Oo Laga Furay Kiniisad Dawladdu Ogolaatay
Next: Wasiir Xil Ka Qaadistiisa U Nisbeeyay Cid Aan Madaxweynaha Ahayn